फाफुरीको स्कूटी ~ brazesh
त्यसैले फाफुराले उसलाई निरुत्साहित पार्नेबाहेक अरु बाटो देखेन । उसले फाफुरीको हात आफ्नो हातमा लिएर मायालु पाराले सुम्सुम्याउँदै भन्यो “हेर प्यारी फाफुरी, तिमीले भन्यौ भने म आफ्नो कलेजो निकालेर तिम्रो अघि राखिदिन तयार छु । तर, मेरोअगाडि यो स्कुटी भन्ने कुराको नामै नलिऊ । काठमाडाैंको बाटो ‘मौतका कुवा‘ बराबर हो । यहाँ विशेष गरेर तिमीजस्ती सुन्दरीले स्कुटी चलाएको देख्यो भने उरन्ठेउला ठिटाहरु र माइक्रोलगायतका सार्वजनिक सवारीका चालकहरु चीलले परेवाको बच्चा देख्या जसरी लालायित हुन्छन् । अस्ति भर्खर मैले चिनेकै एक त्यस्तै युवतीलाई छ पाङ्ग्रे ट्रकले ठोक्देर अस्पतालै पुर्‍याइदियो । बल्लबल्ल ठीक भएकी छिन् । त्यसैले ९० प्रतिशत चालकलाई ट्राफिक नियम थाहा नभएको अनि १० प्रतिशतले थाहा पाएर पनि नटेर्ने यो सहरमा स्कुटी चलाउँछु भन्ने कुरा नगर ।”
फाफुराको करुणरसले भरिएको यो कुराको उसमा पटक्कै असर भएन । उसले सुरो अनुहार लगाएर भनी, “त्यस्तो लाछी कुरा गरेर पनि हुन्छ फाफु ? दशा लाग्यो भने त कसको के लाग्छ र ? तनहुँबाट रामचन्द्र पौडेल त चुनाव हार्न सक्छन् । अरु कुराको के भर छ र ? हेर, सार्वजनिक यातायातमा जागीर खान जाँदा तिम्री फाफुरीको कस्तो बिजोग हुन्छ । कस्ताकस्ता मान्छे ढेप्पिन आउँछन्, कहाँकहाँ हात पुर्‍याउँछन् । तिमी त्यो सहन सक्छौ ?”